Fitsapan-kevi-bahoaka - Wikipedia
Ny fitsapan-kevi-bahoaka dia fomba amantaran' ny fahefana pôlitika ny hevitry ny olom-pirenena ao amin' ny vondrom-paritra na firenena iray mahakasika ny lalàm-panorenana na ny fepetra noraisain' ny fahefana iray na eritreretiny ho raisina, amin' ny alalan' ny fampanaovana fifidianana. Fampandraisana anjara mivantana ny vahoaka amin' ny raharaha pôlitika ao amin' ny vondrom-paritra na firenena azy izany.
Matetika dia asaina mamaly amin' ny hoe "eny" na "tsia" ny olom-pirenena manoloana ny fanontaniana izay nofaritan' ny fahefana te hahalala ny hevitry ny vahoaka ny andinindininy aio amin' izany tolokevitra izany. Ny fanapahan-kevitra hampanao fitsapan-kevi-bahoaka dia mety avy amin' ny fahefana mpanatanteraka ao amin' ilay vondrom-paritra na ao amin' ilay firenena, na avy amin' ny fahefana mpanao lalàna, na avy amin' ny alalan' ny fangatahana ataon' ny vahoaka.
Matetika ny firosoana mankany amin' ny fahaleovan-tena pôlitika, izay mamorona fanjakana vaovao vokatry ny fisarahana avy amin' ny vondrom-paritra na firenena lehibe kokoa, dia mitaky ny famantarana ny hevitry ny olom-pirenena voakasika ao amin' ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fanapahan-kevitra ny amin' ny hoavin' izy ireo ara-pôlitika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsapan-kevi-bahoaka&oldid=1041243"
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2021 amin'ny 09:05 ity pejy ity.